सगरमाथाले बोलाएर नै मैले कोरोना पश्चात सफल आरोहण गर्न सकें - जाङ्ग्बु शेर्पा - ParyatanBazar.com
बिनिता सिवाकोटी४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार मा प्रकाशित
जेठ ४, काठमाडौं। विश्व कीर्तिमान कायम गरेका जाङ्ग्बु शेर्पाले सत्रौँ पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । उनले सन् २००६ मा ४ मिनेट ४० सेकेन्ड सगरमाथाको चुचुरोमा कपडा नलगाई विश्व रेकर्ड कायम राखेका थिए ।
उनले कोरोनाबाट सन्चो भएको डेढ सातामै बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीसँगै सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । उनले वैशाख २८ गते मङ्गलवार बिहान ६ बजेर ५ मिनेटमा सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । प्रस्तुत छ आरोही जाङबु सँग पर्यटन बजार ले गरेको कुराकानी !
सगरमाथा आरोहणको लागि हिँड्नुभएको तपाईँ अचानक कोरोनाका कारण फर्किनु पर्‍यो , कोरोना अनुभव कस्तो रह्यो ?
बहराइनको राजकुमारको टोलीसँगै काठमाडौँबाट २२ चैत २०७७ मा मैले बेस क्याम्प प्रस्थान गरेको थिए । सगरमाथा बेस क्याम्पमा हुँदा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने समस्या भएपछि म ७ वैशाख २०७८ मा हेलिकप्टरमा काठमाडौँ आए र सिधै ऐरा हस्पिटल मा भर्ना भए । परीक्षण गर्दा म मा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । स्वास्थ्य बिग्रिँदा साँच्चै नै दुःख लागेको थियो ।
कोरोना सङ्क्रमण भएपछि म ६ दिन अस्पताल बसे भने ६ दिन होम आइसोलेसनमा बसे । कोरोना मुक्त भए लगत्तै मनले मानेन फेरि वैशाख १९ गते सगरमाथा बेस क्याम्पतिर लागे र वैशाख २८ गते सगरमाथा सफल आरोहण गर्न सफल भएँ।
कोरोनाबाट मुक्त हुने बित्तिकै सगरमाथा आरोहण गर्न पुन हिम्मत जुटाउन भयो , यस्तो शक्ति कसरी प्राप्त गर्नुभयो ?
कोरोना सङ्क्रमण भएर बिरामी भएँ, सन्चो हुने बित्तिकै सगरमाथा गएँ । कोरोना जितेर जानु धेरै जोखिम थियो, आत्मबल बलियो बनाएर गएको थिएँ । कुनै समस्या नभएर राम्रैसँग सगरमाथा आरोहण गरेर काठमाडौँ फर्केको छु ।’ सगरमाथा जानु मेरा तीन ओटा प्रेरणा का कारण हरू छन् ।
१, सगरमाथा को नयाँ हाइट ८८४८.८६ मा मलाई पाइला राख्नु थियो ।
२, कोरोना भर्खर भर्खर निको भएको मान्छे होस वा अन्य कुनै समस्या बाट ग्रसित , आत्मबल , हिम्मत, इच्छा शक्ति भयो भने मान्छेले सगरमाथा चढ्न पनि सक्छ वा अन्य कुनै चाहेको काम गर्न सक्छ ।
३, आज सम्म १६ औँ पटक आरोहण गर्दा धेरै मानिसहरूसँग आरोहण गरे तर पहिलो पटक रोयल फेमिलीसँग आरोहण गर्ने अवसर मिलेको थियो जसलाई म गुमाउन चाहन्न थिएँ।
एउटा छुट्टै उमङ्ग बोकेर सगरमाथा तर्फ लम्किएका पाइला अचानक स्वास्थ्य बिग्रिएर फर्किनु पर्दा को पललाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
म साँच्चै नै धेरै एकसाइटेड थिएँ । तर अचानक म मा देखिएको भाइरसले मलाई धेरै नै चिन्ता लाग्यो । सगरमाथाको नयाँ हाइटमा पुग्न सक्दिन की भन्ने चिन्ता एकतिर, राजकुमार सँग को यात्रा को अनुभव बटुल्न नपाउने चिन्ता र कोभिडबाट दिनहुँ मानिस मरेको सुन्दा आफ्नै शरीर पनि नरहला की भन्ने अर्को चिन्ता। जुन समयमा म अस्पताल भर्ना भएको थिएँ त्यो समय मा मेरो स्वास्थ्य धेरै नै बिग्रिएको थियो । शायद मेरो सगरमाथा प्रतिको इच्छा शक्ति धेरै भएर होला मैले छिट्टै कोरोना लाई पनि जिते र कम समयमै सगरमाथा पुगेर पनि आए ।
बहराइनका राजकुमारसँग को सगरमाथा यात्रा कस्तो रह्यो, अनि राजकुमारको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो ?
कोरोना कै कारण मैले धेरै समय उहाँ सँग बिताउन पाइन् तर जति बिताए त्यो एकदमै राम्रो पल थियो । राजकुमार सँगको मेरो यात्रा सुखद रह्यो उहाँको बानी व्यवहार एक नजिकको साथी मा भेटिने आत्मीयता जस्तै थियो सार्है फ्रेन्ड्ली। र यस यात्राले धेरै राम्रा कुराहरू पनि सिकायो ।
राजकुमार पनि विश्वकै अग्लो चुचुरोमा पाइला राख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी देखिनु हुन्थ्यो । अन्तराष्ट्रिय स्तरको ठुला व्यक्तित्व हरुले हाम्रो देश नेपालको पर्यटकीय स्थल आउँदा विश्व सामु राम्रो छाप पनि पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा उहाँ गौरवान्वित भएर फर्किनुभएको कुरामा दुई मत छैन ।
कोरोना लाई जित्न के के कुरा आवश्यक छ ?
सर्व प्रथम त सकारात्मक सोच हुनु एकदमै जरुरी छ । कोरोना का कारण मृत्यु भएका नराम्रा समाचार लाई समे सन्न सुन्दै नसुन्ने , यस्ता समाचार ले म पनि मर्छु की भन्ने डर पलाउँदो रहेछ । त्यसपछि परिवारको माया, साथ र सहयोग , स्वास्थ्यवर्धक खाना को पनि कोरोना पराजित मा ठुलो भूमिका हुन्छ । मैले धेरै सुप र फलफूल हरू खाए र आफूलाई शान्त गर्न मद्दत गर्ने चीजहरू गरे ।
कोरोना जित्न आत्मबल ठुलो कुरा हो, म कोरोना जिते लगत्तै सगरमाथाको चुचुरो पुगेर आएको छु । कोरोना सङ्क्रमण भएँ भन्दै आत्मबल कमजोर नबनाउन सबैमा आग्रह गर्दछु ।
यस सिजनको आरोहण गर्दाको अविस्मरणीय क्षण लाई सम्झिनु पर्दा कसरी सम्झनु हुन्छ ?
यसपालि को त कोरोना लाई जितेर सगरमाथा को नयाँ हाइट मा कदम राख्नु नै हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सामु पनि मेरो यस आरोहण ले सकारात्मक सन्देश जानेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु कि कोरोना बाट रिकभर भएर पनि सगरमाथा आरोहण गर्न सकिन्छ भनेर।
अर्को पक्ष भनेको मेरो यस कदम बाट एक जना कोरोना को बिरामीले पनि प्रेरणा लिएर आफ्नो जीवनको कठिन परिस्थिति मा आत्मबल बढाएर सुरक्षित रहन सक्नुभयो भने पनि म धेरै खुसी हुनेछु ।
कोरोना लाई जित्न आत्मबल बढाउन अत्यन्तै जरुरी छ ।
आगामी दिनमा के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
अहिलेको समयमा त कोरोना बाट जोगिएर सुरक्षित र स्वस्थ्य रहनु नै हो । स्थिति सामान्य भएपछि माउण्टे नियरिङ मै समय बिताउँछु ,हिमाल आरोहण मेरो प्यासन हो । यो बिना म रहन सक्दिन ।